Wararka - Nidaamka Taageerada Dhulka Dayactirka
Nidaamka Taageerada Dhulka ee Dayactirka wuxuu siiyaa shaqaalaha dhulka diyaaradda iyo shaqaalaha taageerada dayactirka si ay u soo dejiyaan oo u soo dejiyaan dhammaan xogta dayactirka diyaaradda si loo falanqeeyo caafimaadka iyo adeegsiga. Nidaamku wuxuu kaloo taageeraa is-weydaarsiga xogta nidaamyada maareynta maraakiibta wuxuuna siin karaa diyaaradda Gripen casriyeyn software.
Falanqaynta xogta dayactirka
Nidaamka Taageerada Dhulka ee Dayactirka wuxuu awood u siinayaa maareynta howlaha maareynta dayactirka diyaaradda iyada oo la adeegsanayo xaaladaha hawlgalka meelo kala duwan.
Waxay siisaa shaqaalaha diyaaradda dhulka iyo shaqaalaha taageerada dayactirka si ay uga soo ceshaan duubista xogta dayactirka hal ama dhowr nooc, sameynta Nidaamka Korjoogteynta Caafimaadka iyo Isticmaalka (HUMS) ee diyaaradda si loo qiimeeyo loona falanqeeyo. Nidaamku wuxuu kaloo bixiyaa qalab loogu talagalay go'doominta guul -darrada gacanta ee dhacdooyinka guul -darrada, wuxuuna bixiyaa sirqoollo iyo garaafyo si loogu taageero farsamo -yaqaannada sidii diyaaraddu u noqon lahayd mid shaqaysa.
Taageerida casriyeynta software -ka diyaaradaha
Diyaaradaha dagaalka ee Gripen ayaa had iyo jeer heli kara cusboonaysiinta softiweerka iyadoon loo eegin meesha ay joogaan, si loo buuxiyo shuruudaha hawlgalka ee hadda jira. Nidaamka Taageerada Dhulka ee Dayactirka, iyo sidoo kale is -dhexgalka u dhexeeya diyaaradda iyo Nidaamka Abuurista Khariidadda Dijital ah si loo soo rogo xog culus oo goobta laga qaadi karo.
Interfaces leh nidaamyada maaraynta maraakiibta
Nidaamka Taageerada Dhulka ee Dayactirka wuxuu taageeraa wareejinta xogta nidaamyada maareynta maraakiibta ee kala duwan si loogu taageero qalabka farsamada iyo qorsheynta. Iyada oo la isweydaarsanayo xogta waxqabadka farsamada ee maaraynta xuduudaha hawlgalka diyaaradaha iyo xogta daalka ee cutubyada la beddeli karo ee diyaaradda iwm.
Nidaamka taageerada dhulka dayactirka MGSS
Iyadoo la jaanqaadeysa diyaaradda dhabta ah, Saab waxay soo bandhigtaa nidaamyo taageero hawlgal oo horudhac ah iyo warbaahinta nidaamka tababarka oo loo sameeyay inay ka tarjumaan nidaamka hubka ayaa ah qaabeynta hadda jirta. Shirkadda Saab waxay samaysay hannaan horumarineed oo dhammaan shuruudihii nidaamka hubka oo dhan goor hore la qabtay, taas oo saamayn ku yeelanaysa naqshaddeeda bilowgiiba.
Naqshadayntu mar bay soo dhawaatay, oo ay wadaagaan dhammaan aaladaha iyo softiweerrada loo adeegsado samaynta diyaaradda dhabta ah, waxay hubisaa in wixii isbeddel ah ee diyaaradda si toos ah loogu muujiyo hababka taageerada iyo tababarka.